हिन्दु राज्य बारे जनमत संग्रह हुनु पर्दछ - जबर्जस्ति थोपरिएको निरपेक्षता मान्य छैन ~ Khabardari.com
हिन्दु राज्य बारे जनमत संग्रह हुनु पर्दछ - जबर्जस्ति थोपरिएको निरपेक्षता मान्य छैन
1:04 PM admin No comments
हिन्दु राज्य कायम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?
तत्काल संविधान संशोधन गरेर पनि हिन्दु राज्य कायम गर्न सकिन्छ, तर नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक दबाब छ भने जनमतसंग्रह उत्तम विकल्प हुन सक्छ । भर्खरै बेलायतमा भएको छ । नेपालमा हिन्दु राज्य चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह गर्न किन नमान्ने ? कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ठूला पार्टी भन्ने अनि जनताको मत लिन नखोज्ने ? यी तीन दलका नेताको कार्यशैली त हिटलरको भन्दा पनि बढी भयो ।
जनमत संग्रहमा जान हामी तयार छौँ । मंसिरतिर जनमतसंग्रह गरौँ, धर्म निरपेक्षवादीले जिते भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छौं । हिन्दु राज्य पक्षधरले जिते भने पनि उहाँहरूले मान्नुपर्यो ।
हिन्दु राज्यका विषयमा तीन दलको नेतृत्वसँग तपाईंको छलफल भएको छ ?
अहिले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको छ । प्रचण्डकहाँ म जान सकिनँ, साथीहरू जानुभएको छ । मुखले ठीक पार्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्ने नेतृत्वको शैली छ । त्यसैले त अब आन्दोलनको विकल्प भएन ।
तपाईंहरूको हिन्दु राज्य कायम गर्ने अभियानमा भारतको कट्टरपन्थी आरएसएसको समर्थन छ र ?
सहानुभूति होला उसको, तर मलाई त्यस विषयमा थाहा छैन । आरएसएससँग मेरो सम्पर्क छैन ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
केपी ओलीले जुन सपना देखाउनुभएको छ, त्यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ । सपना वा सोचाइ त राख्नुपर्यो नि । हिजो मैले राख्न सकिनँ भनेर अहिले ओलीले राख्दा किन विरोध गर्ने ? उहाँले बोलेका कुरा कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सपना देख्न त पाउनुपर्यो नि ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्लान् ?
यो सरकार नै अपवित्र गठबन्धन हो । यहाँ कोही संघीयताविरोधी, कोही राजावादी, कोही क्रान्तिकारी, कोही संघीयता पक्षधर, कोही बन्दुक उठाउने कुरा गर्छन् । त्यसरी हेर्दा यो अजीवको सरकार हो । यस्तो सरकार यसअघि नेपालमा कहिल्यै थिएन । यस्तो गठबन्धनको सरकार कति दिनसम्म अघि बढ्छ भन्ने पनि हो ।
सरकार जान्छ, जान्छ भन्ने पनि सुन्छु । चित्रबहादुर केसी देखेर मलाई अचम्म लागेको छ । केसीलाई म व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु । संघीयताको मामलामा उहाँको र मेरो कुरा मिलेको पनि थियो । उहाँ किन यो सरकारमा जानुभयो, म अचम्ममा परेको छु । उहाँलाई संसद्मा बोल्दा सांसदहरू कुरेर बस्थे, जनताले सुन्न खोज्थे ।
तर उपप्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको बोली बन्द भयो । सत्ता त पाउनुभयो, तर उहाँलाई केही फाइदा भएजस्तो लाग्दैन । राजसंस्था र हिन्दु राज्य भनेर जनमत लिने, अनि सत्ताका लागि कम्युनिस्टहरूको सरकारमा गएर बस्ने कमल थापाको निर्णय पनि मलाई उचित लागेको छैन ।
मधेस आन्दोलनले संविधान संशोधनको माग गरेको छ, मधेसकेन्द्रित दलसँग तपाईंहरूको सहकार्य हुन सक्छ ?
मधेस आन्दोलन जायज छ । पहिलो मधेस आन्दोलन हुँदा ५४ जना साथीहरू सहिद भएका छन् । संघीयताले गर्दा मधेस आन्दोलन भएको हो । सुरुमै पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँचवटा संघ बनाएको भए सबैले मान्थे । पछि घूसपैठ भयो । विभिन्न राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट भयो । उनीहरूका नेपाल बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो रणनीतिक इन्ट्रेस्टहरू भए । त्यसले पहिलो मधेस आन्दोलनमा जुन सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार गएको भए यो आन्दोलन हुने थिएन ।
त्यतिबेला हाम्रै पार्टीका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले र माओवादीको नेतृत्वपंक्ति बसेर मधेस स्वायत्त प्रदेश भनेर हस्ताक्षर गरेको हो । त्यतिबेला सहमति गर्ने अनि अहिले उनीहरू अलि कमजोर भएको बेला हेपेर कार्यान्वयन नगर्न पाइन्छ ? अहिले मधेसका जनता, नेतालाई पहाडीले हेपे भन्ने मनस्थिति विकसित भएको छ ।
यो देशका लागि दुर्भाग्य हो । त्यसो हुनै दिनु हुँदैनथ्यो नेताहरूले । उहाँहरूले भनेजस्तै मधेस दुई प्रदेश बनाएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? निकास दिन कसैले पनि चाहेनन् । मधेसमा ४९ जना सहिद भइसकेका छन् । उनीहरू त सच्चा नेपाली हुन् । यस्तो स्थिति बढ्दै गयो भने श्रीलंकामा लिट्टेले जस्तै हतियार उठ्यो भने के हुन्छ ? पहाडमा विप्लवको हतियार र मधेसमा सिके राउतको हतियार उठ्यो भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था भोलि नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले मधेसलाई गहिरो अध्ययन गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
प्रसंग बदलौँ, पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केही बिग्रिएको भनिन्छ नि ?
नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रनु भनेको दुवैको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । कसरी बिग्रियो भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन । अन्धराष्ट्रवादको नाममा भारतको विरोध गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । यसको मतलब हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छोड्ने भनेको होइन । भारत र हामी नमिल्ने हो भने भोलि अर्कैले खेल्छ ।
भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको त्यही मधेसको आन्दोलनले होइन र ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? संविधान बनाउने दलका नेताहरू होइनन् ? आन्दोलन पहाडीले गरेको भए भारतलाई दोष लाग्दैनथ्यो, तर मधेसीले गरेकाले भारतलाई दोष लगाइयो । कुनै पनि सच्चा नेपाली भारतको विरोधी हुन सक्दैन । नेपाल र भारतबीच कताकता तालमेल नमिलेको र असमझदारी भएको अवस्था हो अहिले ।
भारतसँग दूरी बढ्नुमा छिमेकी चीनको पनि भूमिका छ भन्छन् नि ?
नेपालको विकासमा जुन मुलुकले सहयोग गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । नाकाबन्दीको बेला सामान पठायो भनेर चीनसँग यो सरकार मिल्यो भन्नु उपयुक्त होइन । जनताले ग्यास बाल्न भएका छैन, गाडी चढ्न पाएका छैन त्यस्तो बेला के गर्ने ? जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यही गथ्र्यो । त्यसलाई भारतविरोधीको रूपमा लिनु गलत हो ।
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वसँगै अबको भूमिका के हुन्छ ?
सभापतिले पहिला पार्टीभित्र मनोनयन र विभाग गठन छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर पनि मैले भनिसकेको छु । उहाँले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनपछि सबै मनोनयन गर्छु भन्नुभएको छ । तर बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ, छिटो गर्नुस् भन्ने सुझाव मैले दिएको छु ।
महाधिवेशनअघि तपाईंलाई उपसभापति बनाउने सहमति भएको हो ?
यो प्रश्नको उत्तर सभापति देउवालाई नै सोध्नुस् । पार्टीमा विगतमा गरेको योगदान र वरिष्ठता हेर्ने हो भने म शेरबहादुरजी र रामचन्द्र पौडेलजीपछि वरिष्ठ हुँ । मलाई मुद्दा लागेर यो अवस्था आयो । शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले मानेकै छु । त्योभन्दा तलकालाई मान्न मलाई गाह्रो हुन्छ ।अन्नपुर्णबाट